CANON ၏ LASERBASE MF3228 များအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
MFP ကို ​​Canon LaserBase MF3228 များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
MFP အထူးသဖြင့် Windows7ကိုနဲ့ Microsoft ကနေအသက်ကြီးတဲ့ OS ဗားရှင်းပေါ်, သငျ့လျြောသောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ယာဉ်မောင်းလိုအပ်သည်တစ်ဦးစုစုပေါင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ MF3228 ကို Canon device ကိုထုတ်လုပ်သူဤနည်းဥပဒေမရှိချွင်းချက်ဖြစ်တယ်, ဒါဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာကျနော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစား MFP များအတွက်ယာဉ်မောင်းရှာပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့အဓိကနည်းလမ်းမှာကြည့်ပါ။
Canon ၏ LaserBase MF3228 များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပြဿနာများမှသာလေးဖြေရှင်းချက်ကွဲပြားခြားနားသော algorithm ကိုလုပ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်းရှိပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြောင်းအကြံပြု, ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသင်တို့အဘို့အသင့်တော်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။
Method ကို 1: ကို Canon တို့ကထိန်းသိမ်းထားဝက်ဘ်ဆိုက်
တိကျတဲ့စက်ကိုယာဉ်မောင်းပထမဦးဆုံးအရာရှာဖွေနေထုတ်လုပ်သူရဲ့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်: အရှိဆုံးကုမ္ပဏီများမှလိုအပ်သော software ကို download လုပ်ပါမှ၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များလင့်များအပေါ် post ။
ကို Canon Portal ကိုကိုသွားပါ
အပေါ်က link ကို Follow နှင့်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "ပံ့ပိုးမှု".
နောက်တစ်ခု - "Downloads နှင့်အကူအညီများ".
စာမျက်နှာအောက်ကိုဆင်းနှင့်ဤအမှု၌ပြုလုပ်သို့ device ကို၏အမည်ကိုရှာဖွေမှု string ကိုရိုက်ထည့်ပါ, MF3228။ ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုညာဘက် MFP ပြသပေမယ့် i-SENSYS အဖြစ်အချို့သောလိမ့်မည်သတိပြုပါ။ ဒါဟာတူညီတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သယံဇာတကိုထောကျပံ့သှားဖို့ဖိုင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါ site ကိုအလိုအလျောက် operating system ကိုဗားရှင်းနှင့်အနည်းနည်းစုံစမ်းသိရှိလာပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုမမှန်ကန်ကြောင်းပြဌာန်းခွင့်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ပုံရိပ်စာရင်းထဲတွင်မှတ်သားသုံးပြီးကိုယ်တိုင်ဆန္ဒရှိတန်ဖိုးများထားကြ၏။
ကျွန်တော်သာအသင့်လျော်သည့် software ကိုအထုပ်ကိုရှာဖွေဖိုင်တွေရဲ့စာရင်း scroll နှင့် button ကို click နိုငျသောကွောငျ့ရရှိနိုင်ပါ drivers တွေကိုလည်း, compatibility နှင့်နည်းနည်းများအတွက်ခွဲခြားပေးသည် "Upload လုပ်ပါ".
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမီ, အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်ဖတ်ပါ, အဲဒီနောက်စာနယ်ဇင်း "Accept and download".
Method ကို 2: third-party software
အလိုအလျှောက်အဆိုပါချိတ်ဆက်ဟာ့ဒ်ဝဲ detect နှင့်ထိုသို့ drivers တွေကိုရှာနိုင်သည်ကိုသေးငယ်တဲ့ applications များ: မကြာခဏအစီအစဉ်များ-drayverpakov ၏တည်ရှိမှု၏ဖြစ်ကောင်းသတိထားကွန်ပျူတာများ, နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်သူများသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ဖတ်ရှုပါများအတွက်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရေးဆရာများပြီးသား, ထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲအရှိဆုံးအဆင်ပြေထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။
ပိုများသော: drivers တွေကို install လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဆော့ဝဲ
အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့က DriverMax အစီအစဉ်ကိုရန်သင့်အာရုံကိုဆွဲချင်တယ်။ လျှောက်လွှာ၏ interface တစ်ခုဖော်ရွေများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အခက်အခဲများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်ရှိပါသည်။
သင်ခန်းစာကို: program ကို DriverMax အတွက်ဒိတ်လုပ်ပါယာဉ်မောင်း
Method ကို 3: ပစ္စည်း Identifier
ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိကိရိယာ drivers တွေကိုရှာတွေ့မှနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့လမ်းပင် Third-party အစီအစဉ်များတပ်ဆင်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့က ID ကို LaserBase MF3228 သိရန်အဘို့လောက်ပေ - ဒီတူ:
ထို့နောက် ID ကိုသယံဇာတ DevID ၏အထူးကြင်နာ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်ထဲသို့ဝင်ရပါမည်: ဝန်ဆောင်မှုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်လျော်သောယာဉ်မောင်းဗားရှင်းကိုငါပေးမည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့တစ်ဦးကအသေးစိတ်လမ်းညွှန်အောက်က link ကိုဆောင်းပါး၌တွေ့နိုင်ပါသည်။
Read more: ဟာ့ဒ်ဝဲ ID အတှကျ drivers တွေကိုရှာရန်
ဖြစ်စဉ်ကို 4: System Tools
ယနေ့နည်းလမ်းများအတွက်နောက်ဆုံး built-in tool များ၏အသုံးပြုမှု windose ပါဝငျသညျ။
ခေါ်ရန် "Start" ပွင့်လင်းအပိုင်း "ဖုန်းများအတွက်နှင့်ပုံနှိပ်".
ကို item ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "ပရင်တာ Installing"အဆိုပါ toolbar ကိုအပေါ်တည်ရှိပါတယ်။
ကို Select လုပ်ပါ "ဒေသတွင်းကပရင်တာ".
သင့်လျော်သောပရင်တာ port ကိုဆက်သွယ်မှုနှင့်စာနယ်ဇင်း Install "Next ကို".
ဤသည်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှ devices များမော်ဒယ်များတစ်ဦးရွေးချယ်မှုနဲ့ window ကိုဖွင့်လှစ်။ အို Built-in ယာဉ်မောင်းစာရင်းကိုစာနယ်ဇင်းသောကွောငျ့, ကျွန်တော်တို့ကိုမပေးတပ်မက်လိုချင်သောအများအတွက် "ဒီကို Windows Update ကို".
အောက်ပါစာရင်းများတွင်မော်ဒယ်နှင့်စာနယ်ဇင်းနေရာချထား "Next ကို".
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်ပရင်တာအမည်ကိုသတ်မှတ်, ပြီးတော့ပြန် button ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် "Next ကို" အဆိုပါယာဉ်မောင်းကိုအလိုအလျောက် download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့။
စည်းကမ်းအတိုင်း, ဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်ပြီးနောက် reboot မလိုအပ်ပါဘူး။
ကျနော်တို့ MFP ကို ​​Canon LaserBase MF3228 များအတွက်ယာဉ်မောင်းရှာပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ရရှိနိုင်လေး options များထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။